Air Astana na-ebupụta ụgbọ elu na-aga Maldives
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Astana na-ebupụta ụgbọ elu na-aga Maldives
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • Akụkọ Maldives na -agbasa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ikuku Astana ga-amalite ọrụ na Maldives ugboro abụọ n'izu, na Wednesde na Satọde site na Disemba 5, yana mgbakwunye na Mọnde site na Disemba 21, 2020.
A ga-eji ụgbọ elu ụgbọ elu Airbus A321LR nke oge a rụọ ọrụ ụgbọ elu ndị a na-ahazi na oche oche 16 Business na oche oche 150 Economy. Ejiri oche 16-inch nke nwere ụlọ ọrụ ịgha ụgha na-akwụ ụgwọ, ya na oche anọ nke 16 na-enye ohere onwe onye. N'ime klaasị akụ na ụba, oche Recaro na-enye nkasi obi ka ukwuu maka ụgbọ elu dị ogologo ma nwee ihe ngebichi 10-inch.
N'ihi nnukwu ọchịchọ n'oge ezumike oge, site na 16 Dec ruo 16 Jan 2020, ụgbọ elu Boeing 767 buru ibu ga-arụ ọrụ ụgbọ elu, na-enye ikike oche ọzọ.
Na Wednesde na Satọde, ụgbọ elu ga-apụ Almaty na 01.20 mpaghara oge wee rute na Male na 07.05 mpaghara oge, na Mọnde ụgbọ elu ga-apụ Almaty na 01.30 mpaghara oge wee rute Male na 07.15 mpaghara oge. Laghachi ọrụ na nwoke na-apụ na 19.35 wee rute Almaty na-esote ụbọchị na 03.10 oge mpaghara.
Ego malitere site na US $ 677 na klasị akụnụba yana site na US $ 2067 na klas azụmaahịa, gụnyere ụtụ isi na mgbakwunye. Pricesgwọ ndị a dabere na ọdịiche dị na ọnụego mgbanwe ụbọchị tiketi.
Mgbe etinyere na ntanetị, a na-enye ndị na-abanye visa abanye n'efu n'ọdụ ụgbọ elu ma na-arụ ọrụ maka ụbọchị 30 site na ụbọchị nnata ya.
Ihe ndenye chọrọ na Republic of Maldives gụnyere akwụkwọ nyocha PCR ule dị mkpa na Bekee na nsonaazụ na-adịghị mma. Asambodo kwesịrị ịdị irè maka elekere 96 site na oge ịnwale ule ahụ ruo oge mbata ụgbọ elu akwadoro. Antsmụaka na-erubeghị afọ iri na abụọ gbanahụ ule a.
A na-achọkwa ndị njem ka ha mejupụta nkwupụta ahụike ahụike nke mmanye, awa 24 tupu ị rute ebe ị na-aga. Na ụdị nkwupụta ahụ, ndị njem ga-ebugo foto ha (ihe ruru 2 megabytes), yana ule PCR na nsonaazụ na-adịghị mma. Ndị njem si mba ọzọ ga-enwerịrị akwụkwọ nyocha PCR na-adịghị mma (ihe karịrị ụbọchị 3 kwesịrị ịgafe site na ụbọchị ewepụtara nsonaazụ ahụ ruo oge gafere ókè nke Republic of Kazakhstan), ma ọ bụghị na enwere ike igbochi ha ebi ebi.